Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက် - erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု
ဤစာမျက်နှာကို erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမှသက်ဆိုင်ရာအနည်းငယ်လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ သက်သေအထောက်အထားဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (ED, DE, PE) အယှက်နိုငျကွောငျး mounting ဖြစ်ပါတယ်။ အလည်အပတ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သော YBOP ရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးအတှကျ။ porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေသင့်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်ဤနိဒါန်းဆောင်းပါးကိုဖတ် - porn-သွေးဆောင် ED (PIED) ။
မှာသက်ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုအကျဉ်းချုပ် Read သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြုအဖြစ် 120 သတင်းဆောင်းပါးတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု၏သတိပေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနေဖြင့် Porn-ED ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကုသသောကျွမ်းကျင်သူများ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ အထူးသဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လိင် - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမသိဘဲဖြစ်နေဆဲပင်။ ကြည့်ပါ အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သူများက PIED ဆငျးရဲဒုက်ခကိုပြောပြပါ (အကောင်းနဲ့အဆိုး) ။
ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 40 လေ့လာမှုများကျော်။ စာရင်းထဲတွင်ပထမ ဦး ဆုံးလေ့လာမှု7သရုပ်ပြသတိပြုပါ causationပါဝင်သူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုပယ်ဖျက်ပြီးနာတာရှည်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုကုသပေးခဲ့သည်။ ရှိပါတယ် ဒီထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက် 75 လေ့လာမှုများကျော်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းကော? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 52 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။ porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 27 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ 55 လေ့လာမှုများကျော် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။ porn စွဲ၏အသံဝေဖန်သူများကမဟုတ်မမှန် "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn စွဲကွာရှင်းပြသော။ တောင်းဆို အဖြစ်မှန်မှာတော့ လေ့လာမှု (၂၅) ခုတွင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။
“ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ဦး စွာရှာဖွေပါမည်” - လူငယ်များအကြားတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်နှင့်အတားအဆီးများကိုကျော်လွှားခြင်း (၂၀၁၀)
multimode MRI ကနေသက်သေအထောက်အထားများနှင့်စက်သင်ယူခြင်း (2018): သွေးပြန်ကြော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်အလားအလာ biomarker အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ကွန်ရက်များ: တစ်ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် fMRI လေ့လာမှု (2017)
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တွင်လက်ဝဲ prefrontal နှင့် limbic cortex ၏ဦးနှောက်တည်ဆောက်ပုံကွန်ယက်ကို topological ပွောငျးလဲ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များကြောင့်အဓိကအားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလူနာအတွက် ဦး နှောက်ကွန်ယက်များ၏ပျက်စီးနေသော topological ဂုဏ်သတ္တိများ: တစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroimaging လေ့လာမှု (2019)
အထီးတက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းဝန်ဆောင်မှုအင်္ဂါတို့တွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, အမေရိကန်တပ်မတော်နေ့, 2004-2013
Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့်အချိန်မတန်မီသုက်: Interrelationships နှင့် Psychosexual အချက်များ (2014)
အနာဂတျအတှကျ Erectile အလုပ်မဖြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု (2009)
ပြည်သူ့ Cyberporn Up ကို Give လြှငျ, သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ Mojo သို့ပြန်သွားရန် Get တော်မူမည်လော
ချို့ယွင်း Prefrontal-Amygdala Pathway, ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Emotion များနှင့်ပုံမှန် Nocturnal စိုက်ထူ (2018) နှင့်အတူ Psychogenic Erectile အလုပ်မဖြစ်လူနာများအတွက်စိုက်ထူ
အာရှ (2011) တွင်အမျိုးသားအမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု
အထောက်အထားဆန်းစစ် (2004): erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတို့အတွက်အာဟာရနှင့်ရုက္ခဗေဒ
လုလင်တို့သည် (2017) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အော်ဂဲနစ်နှင့် psychogenic အကြောင်းတရားများ
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2002)
Young ကကျန်းမာရေးအမျိုးသားများအတွက် Erectile ရာထူးအမည်အပေါ် Erectile အလုပ်မဖြစ်ဆေးနှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ၏အပန်းဖြေအသုံးပြုမှု: Erectile နိုင်ခြင်းအတွက်ယုံကြည်မှု၏အာမခံအခန်းက္ပ။ (2012)
psychogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (2015) တွင်ထစ်အငေါ့ cortical morphometry နှင့်ကွန်ယက်အဖွဲ့အစည်းကသို့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
လေ့လာမှု: အင်္ဂါပုံရိပ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပူပန်နှင့်လူငယ်အမျိုးသားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအမှုထမ်းများအနက် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2015)
လေ့လာမှု: လုလင်တို့သည် (2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုတစ်ခု etiological အချက်အဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သော masturbatory အလေ့အကျင့်
အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်လက်ဝဲသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏အခန်းကဏ္ဍကို: FMRI အားဖြင့်ထင်ရှားကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းများဒိုင်းနမစ် (2012)
စစ်ရေးယောက်ျားအတွက် (L) Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသုံးဆစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်
(L) လူငယ်ယောက်ျား ED-မူးယစ်ဆေးစံချိန်တင်ပမာဏကိုအသုံးပြုနေသည်။ (ဆွီဒင်)